ShweMinThar: HOW TO CARE FOR JEANS – Buyer’s Guide
HOW TO CARE FOR JEANS – Buyer’s Guide
ဂျင်းစ တွေဟာ မဲနယ် ဆေးဆိုးပြီး စီမံထုတ်လုပ် ထားတဲ့အတွက် လျှော်ဖွပ် မီးပူတိုက်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်တဲ့အခါ အနည်းငယ် အရောင် လွင့်တာ တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ. အကြိုက်ဆုံး Jeans တွေ အရောင်ရင့် တာကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း နိုင်အောင် အခြောက်လျှော်စက် အသုံးပြုတဲ့အ၀တ်လျှော်ဆိုင် ကိုအပ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ … ဒါပေမယ့် ဈေးတော့ ကြီးပါမယ် …
ဒီအချက်လေးတွေကတော့ အ၀တ်လျှော်ခ အများကြီး မကုန်ဘဲနဲ. အရောင်လွင့်တာကို သက်သာစေနိုင် မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေပါ ….
1. Jeans တွေကို မလျှော်ခင် အတွင်းဘက် ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးမှ လျှော်ဖွပ်ခြင်းအားဖြင့် အချိန်မတန်ခင် Jeans အရောင်ကျခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း မှ ကာကွယ် ပေးနိုင်ပါတယ်။
2. အ၀တ်လျှော်စက်ထဲမှာ Jeans Size ပေါ်မူတည်ပြီး အထည်ရေ3ထည်ကနေ4 ထည်လောက်ပဲ သိပ်ပြီး ကျပ်ကျပ်ကြီးဖြစ်မနေအောင် ထည့်ပါ… Jeans စဟာ အရမ်းလေးတဲ့အတွက် Jeans အများကြီးကို တစ်ချိန်တည်းမှာအ၀တ်လျှော်စက်ထဲ ထည့်လျှော်တာဟာ လျှော်ဖွပ်ပြီးရလာတဲ့ စွမ်းရည်ကို လျော့ကျစေပါတယ် ….
3. တကယ်လို. Jeans မှာ အပေါက်အပြဲတွေလို မျိုး အပျက်အစီးတွေ ရှိနေရင် အပြဲတွေ ကြီးမသွားအောင် Shirt , blouse တွေထည့်လျှော်တဲ့ Delicate Cycle ထဲမှာ ထည့်ပြီး လျှော်နိုင်ပါတယ်….
4. Jeans တွေကို ရေအေး (သို.) ရေနွေး နဲ.လျှော်နိုင်ပါတယ် … အစွန်းချွတ်ဆေးတွေ သုံးတာ ကို ရှောင်သင့်ပါတယ် … တချို. Company တွေက အရောင်အရင့် ကာလာတွေ အတွက်သီသန်. ဆပ်ပြာမှုန်. ပြုလုပ်နေပါတယ် .. ၄င်းက Jeans color အရင့် တွေကို လျှော်တဲ့ နေရာမှာ အထောက်အကူ ပေးပါလိမ့်မယ် ….. .. တကယ့် Jeans အရောင်ရင့်တွေရဲ. မဲနယ်ဆိုးထားတာတွေ ဟာ အခြားအ၀တ်တွေကို မစွန်း၊မပြန်.စေဖို.အတွက် ၀ယ်ပြီးပြီးချင်း ပထမဦးဆုံးအကြိမ် မ၀တ်ခင်က လျှော်ဖွပ်သင့်ပါတယ် ... ယျေဘုယျအားဖြင့်တော့ ပထမဦးဆုံး လျှော်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ အညွန်း လေးတွေ Jeans တွေမှာ ထည့်ပေး ထားတတ်ပါတယ် ။
5. တွန်.ကြေခြင်းတွေ မဖြစ်အောင် အ၀တ် လျှော်တဲ့စက်ကနေ လျှော်ပြီးပြီးချင်း ချက်ချင်း ဖယ်ထုတ်ပါ… Jeans pant ရဲ. အလှဘက်ကို ပြန်လှန်ပါ .. ဇစ် တွေ ကြယ်သီးတွေ ပြန်တပ်ပြီး ကလစ်နှစ်ခု ပါတဲ့ ဘောင်းဘီ ချိတ်နဲ. ဘောင်းဘီခါးကနေ ချိတ်ပါ … ချိတ်နဲ. ချိတ်ပြီး ခြောက်အောင်လှန်းတဲ့ အတွက် အခြောက်ခံ စက်ကြောင့် စုတ်ပြဲတာတွေ မဖြစ်တော့တဲ့ အပြင် Jeans ကိုလဲ ကျုံ.ခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ် … သို.ပေမယ့် … ကျုံ.သွား ကျဉ်းသွား တာကို လိုချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အ၀တ် အခြောက်ခံစက် ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ….
6. Jeans ကို လျှော်ဖွပ်မီးပူ မတိုက်ခင်မှာ Jeans မှာပါတဲ့ အညွှန်းကို အမြဲ ဖတ်သင့်ပါတယ် … တစ်ချို. Jeans တွေမှာသုံးတဲ့ တန်ဆာဆင် ပစ္စည်းတွေ ပါတဲ့ Jeans style တွေကို အခြောက် လျှော်တဲ့ ပုံစံ နဲ.ပဲ အဆင်ပြေပါမယ် ….
7. လိုချင်တဲ့ Color ကိုရဖို.အတွက် Jeans တွေဟာ စက်ရုံမှာ တခါတရံ ကြိုလျှော်ရပါတယ် .. သို.သော်လည်း Jeans အသစ်ကို မ၀တ်ခင်မှာ အရင်ဆုံး လျှော်တာဟာ Idea ကောင်းတခု ပါပဲ …
Credit To - http://www.thedenimshop.com/
Posted by Alex Aung at 11:48 AM
၀က်နံရိုးကြံမဆိုင်ဟင်း၊ ပဲပုပ်သုပ်၊ ငရုတ်သီးထောင်း...
မြန်မာလူမျိုးများ မြန်မာနိူင်ငံတော်ကို ဘာကြောင့်စွ...
ဧရာဝတီမြစ် အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လေးစားအပ်ပါသောြ...
Microfinance နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး
မြန်မာကျပ်ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိစ္စ (ပြုစုသူ - ဦးမြင့် )
သင့်နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်မှ အနံ့ဆိုးမထွက်စေရန်
အိမ်မှာ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ဓာတုပစ္စည်းများ အသုံးပြုတဲ့အခါ
ကွမ်ယင်ဆိုသည်မှာ (အပိုင်း နှစ်)
ကွမ်ယင်ဆိုသည်မှာ (အပိုင်း တစ်)
ငါးဖယ်သုပ်၊ ကြက်ဥအစပ်မွှေကြော်နဲ့ ကြာရိုးဟင်းခါး
အသည်းကွဲခြင်းအတွက် ကုသမှု အကြံပေးချက်
မဟာစီးပွား နယ်ချဲ့ဝါဒ- ဒေါက်တာနေဇင်လတ်
Facebook ကို ယှဉ်ပြိုင်မယ့် Google+ လူမှုကွန်ယက် ၀...
ဆည်ရေဖောက်ချသဖြင့် တိုက်ကြီး၊ ဥက္ကံတဝိုက် ရွာ ၂၀ ကေ...
ဧရာဝတီမြစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သတင်းစာပါ အစိုးရအာဘော်ကို...
မိမိပို့လိုက်တဲ့ E-mail ကိုလက်ခံတဲ့သူကဖတ်မဖတ်
ကြက်ကချင်ချက်ဟင်း၊ ကြက်ရိုးနှင့် ကျောက်ဖရုံသီးဟင်း...
ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချနည်း အမှားများ
Gluten Free diet အကြောင်း
China’s assessment calls for Burma’s Myitsone Dam ...
ဘဲကင်မွှေးမွှေး၊ ကိုက်လန်ရွက် ခရုဆီနှင့် စွန်တန်ဟင်းရည်
ဂူဂဲလ်+ က ဘရောက်ဇာဗားရှင်းမှ အသုံးပြုနိုင်?
ပုစွန်ဘော့ချိတ်လှော်သုပ်၊ ငါးကလေးအကြွပ်ကြော်နှင့် ...